रेटिनोब्लास्टोमा अर्थात् आँखाको क्यान्सर - अन्तर्वार्ता - नारी
रेटिनोब्लास्टोमा अर्थात् आँखाको क्यान्सर
उदयपुर गाईघाटका ५ वर्षीय अभिषेक ढुंगानाको आँखाको नानीमा साढे दुई वर्षको उमेरमै सेतो डल्लो देखिएको थियो । छोराले पानी खान माग्दा उनकी आमा पुष्पाले उनको आँखा टल्किएको देखेपछि उपचारका लागि अस्पतालमा लगेको बताइन् । उपचारका क्रममा उनको आँखामा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो । अहिले उनको देब्रे आँखा निकालेर कृत्रिम आँखा राखिएको छ ।
अभिषेकजस्तै धेरै बालबालिकामा अहिले आँखाको क्यान्सर देखापरेको डा. वेन लिम्बू बताउँछन् । कतिपय बिरामी दुवै आँखा बिग्रिएपछि आउँछन् । बालबालिकाको आँखा र जीवन बचाउन शीघ्र उपचार आवश्यक हुन्छ । यद्यपि बिरामी ढिलो आउँदा रोगले विकराल रूप लिनुका साथै अर्को आँखामा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । बिरामीका दुवै आँखा काम नलाग्ने भएर निकाल्नुपर्दा आफूलाई आत्मग्लानि हुने डा. वेनले बताए । आँखा ननिकाल्दा बिरामीका अन्य अङ्गमा क्यान्सर फैलिएर ज्यानै जान सक्छ । त्यसैले अन्य अङ्गमा क्यान्सर फैलन नदिन तथा बालबालिकाको ज्यान जोगाउन पनि आँखा निकाल्नुपर्ने बाध्यता भएको डा. वेनले बताए ।
रेटिनोब्लास्टोमा कस्तो रोग हो ?
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने एक किसिमको आँखाको क्यान्सर हो । यो क्यान्सर आँखाको भित्री भाग (रेटिना) बाट पलाउँछ भने आँखाको पूरै भागमा फैलिएर अन्धोपन निम्त्याउन सक्छ । यसको उपचार ढिलो भए शरीरका अन्य भागमा फैलिएर ज्यानै जान सक्छ ।
यो क्यान्सर कति जना शिशुमा देखिएको छ ?
२० हजार नवजात शिशुमध्ये १ जनामा देखा पर्छ । यो रोगले शिशुको एउटा वा दुवै आँखामा असर गर्न सक्छ । यद्यपि धेरै बालबालिकाको एउटा आँखामा मात्र असर परेको पाइन्छ ।
आँखाको क्यान्सर भए नभएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?
प्रारम्भिक अवस्थामा डिजिटल क्यामेरा, मोबाइलले अँध्यारो कोठामा शिशुको अनुहारको तस्बिर खिच्दा आँखाको नानी रातो नदेखिएर सेतो देखिए चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । फोटो खिच्दा आँखाका नानी रातो देखिनु सामान्य हो ।
यसका लक्षण के–के हुन् ?
आँखाको नानी सेतो देखिनु, आँखा डेढो हुनु, आँखा लामो समयसम्म असामान्य रूपमा रातो हुनु तथा आँखा दुख्नु हुन् । आँखा आफै ठूलो भएर बाहिर निस्कन थाल्यो भने रेटिनोब्लास्टोमा भएको हुनसक्छ । यो रोग कतिपयमा एउटै आँखामा त कतिपयमा दुईवटै आँखामा हुनसक्छ ।
रेटिनोब्लास्टोमा बढी हुने सम्भावना कसलाई हुन्छ ?
रेटिनोब्लास्टोमा रोगले असर गरेका बुवाआमाका बालबालिकालाई यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो रोग देखापर्न सक्छ ।
एउटा शिशुमा रेटिनोब्लास्टोमा भए अर्को शिशुमा हुने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
परिवारमा पहिले कसैलाई रेटिनोब्लास्टोमा भएको छ भने अर्को शिशुमा हुने सम्भावना ४० प्रतिशत हुन्छ । यसैगरी परिवारमा पहिले कसैलाई नभै शिशुको एउटा आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा देखियो भने अर्को शिशुमा हुने सम्भावना १ प्रतिशत हुन्छ । परिवारमा पहिले कसैलाई रेटिनोब्लास्टोमा भएको छैन तर शिशुको दुवै आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा भएको छ भने अर्को शिशुमा हुने सम्भावना ८ प्रतिशत हुन्छ ।
रेटिनोब्लास्टोमा भएका मानिसका छोराछोरीमा यो रोग लाग्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
परिवारमा पहिले कसैलाई रेटिनोब्लास्टोमा भएको छ भने शिशुमा पनि रेटिनोब्लास्टोमा हुने सम्भावना ४० प्रतिशत हुन्छ । उसको परिवारमा पहिले कसैलाई रेटिनोब्लास्टोमा भएको छैन तर उसको एउटा आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा छ भने शिशुमा रेटिनोब्लास्टोमा हुने सम्भावना ८ प्रतिशत हुन्छ । परिवारमा पहिले कसैलाई भएको छैन तर उसको दुवै आँखामा रेटिनोब्लास्टोमा छ भने उसको शिशुमा रेटिनोब्लास्टोमा हुने सम्भावना ४० प्रतिशत हुन्छ ।
रेटिनोब्लास्टोमा भए–नभएको कुरा कसरी थाहा पाउने ?
आँखा रोग विशेषज्ञले आँखा–पर्दा (रेटिना) को जाँच गरी यो रोग पत्ता लगाउन सक्छन् । यसैगरी आँखाको अल्ट्रासाउन्ड, आँखा तथा मस्तिष्कको सिटिस्क्यान वा एमआरआई गरेर पनि यो रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यसको उपचार कसरी गरिन्छ ?
लेजर, क्रायोथेरापी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी तथा शल्यक्रिया आदि यो रोगका प्रमुख उपचार पद्धति हुन् । आँखाको क्यान्सरको किसिम, आकार, फैलावट र एक वा दुवै आँखा प्रभावित भएको अवस्थाअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ शिशुलाई एकभन्दा बढी उपचार पद्धति एकै पटक वा धेरै पटक पनि आवश्यक हुन सक्छ ।
आँखा निकालिएका बिरामीलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ?
शिशुको ज्यान बचाउन आँखाको डल्लो पूर्णरूपमा निकालेपछि कृत्रिम आँखा राखेर आँखाको सौन्दर्य तथा शिशुको आत्मविश्वास कायम राख्न सकिन्छ । यसरी राखिएको कृत्रिम आँखाले देख्न भने सकिँदैन ।
–समयमै यो क्यान्सरको पहिचान नभए शिशुको ज्यानै जान सक्छ ।
–जन्मजात रूपमा आउने यो क्यान्सरको पहिचान छिटो र समयमै उपचार भए शिशुको दृष्टि, आँखा तथा जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ ।
–यो रोग पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा लाग्ने भएकाले तीन वर्षभित्र आँखाको जाँच गरेर शिशुको जीवन बचाउन सकिन्छ । ९० प्रतिशतमा ३ वर्ष नपुग्दै देखिन्छ ।
–पहिले–पहिले बिरामीहरू क्यान्सरले आँखा नै बाहिर निस्किएपछि मात्र उपचारका लागि आउँथे भने अहिले आँखाको नानीेमा टीका देखिनेबित्तिकै आउन थालेका छन् ।
–नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा यो रोगबाट मृत्यु हुने रोगीको संख्या ३० देखि ७० प्रतिशत छ तर विकसित देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम पाइन्छ ।
नेत्र रोग विशेषज्ञ, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान
असार ४, २०७६ - तीस वर्ष कटेपछिको जाँच
चैत्र २७, २०७५ - दुखाइको समाधान
चैत्र १९, २०७५ - डिप्रेसनको खतरा कम गर्छ ओखरले
माघ २३, २०७५ - फेसन सिक्रेट्स थ्री उघार्ने तयारी
माघ २३, २०७५ - समयमा उपचार र मनोबल बढाउन सके पक्कै निको हुन्छ
बर्डफ्लु : पशुपंक्षीबाट मानिसमा सजिलै सर्दैन असार ७, २०७६
गर्मीमा छालाको हेरचाह जेष्ठ २७, २०७६
हेयर एण्ड शान्तीकी निर्देशक अनुजा श्रेष्ठ भन्छिन्, सफल हुन हिम्मत जुटाउनुपर्छ जेष्ठ २६, २०७६
अहिले मानिसहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै गएका छन्  जेष्ठ २०, २०७६